Iyi waini chena, inozivikanwa muna 1997 sewaini ye "Indicazione Geografica Tipica", inotorwa kubva kuCatarratto Inzolia mazambiringa ayo anorimwa pane chitsuwa chidiki cheSarina. Iwo unorarama uswa-yeruvara ruvara neakachenesa girazi, uye une kunhuhwirira kuyeuchidza kwemaruva emaruva uye mutsva, flavoursome uye muchero. Iwaini yehunhu, hunhu hwayo hunorangarira kunhuhwirira kwakasimba kwechitsuwa kwarinobva.
Colosi ikambani yanga ichishanda mumunda wewaini kwezvizvarwa zvina. Imbavha inochengeterwa naiye oenologist Pietro Colosi uyo anoteera nhanho dzakasiyana siyana, kubva ku winemaking kuenda kunatsiridza uye kubva kubhodhoro kusvika kushambadzira waini. Kwemakore akawanda kambani yanga ichisanganisira mukugadzirwa kweiyo yekare Malvasia delle Lipari waini. Iyo kambani inofukidza nzvimbo yemahekita gumi muSalina (chitsuwa chidiki icho chiri chikamu cheAeolian archipelago) pakati peCapo Faro nePorri. Iyi nzvimbo inozivikanwa seimwe yemhando yepamusoro pachitsuwa zvese nekuratidzwa kwayo uye nekuda kwemakemikari-epanyama mamiriro evhu ayo, ari iwo anobva mumakomo anoputika, yakanyanya kukodzera kurimwa kwemizambiringa. Kudyara kwemunda wemuzambiringa, wakaomeswa zvakanyanya nekuda kweiyo morphology yevhu, wakaitiswa mumatunhu kudzoreredza madziro akaoma mabwe. Iyo kambani inogadzira mamwe ewaini chaiwo munzvimbo dzeMarsala neSalemi kumadokero kweSisily.
Iyi waini inonyatsoenderana neyekudya kwemidziyo yakavakirwa pahove kana mugungwa.
Iwaini inofanira kushumirwa kune gumi degrees centigrade mune yakajeka, yakajeka kristaro goblets.
Iri haisi waini inofanirwa kuve yakwegura, uye inofanira kudhakwa mukati memakore maviri kusvika matatu ekutenga. Mabhodhoro acho anofanira kuradzikwa musvinu mune yakasviba, yakasviba, ine hunyoro yewaini-cellar.